I-Bitcoin Nomoya Wokuhweba - U-Edwin Van Der Hoeven
Bitcoin, ethereum, ukwesekwa, ukweseka, ukuhweba
~ Izindaba zokomoya nezezezimali kwesinye isikhathi zibukeka ziphikisana. Kule vidiyo yokuqala ngichaza ukuthi ungafunda okuningi ngawe uma uhweba ngamasheya noma ama-cryptos. Kukufundisa ngokubekezela, ukugxila, ukwesaba, isu kanye nezinye izimfanelo eziningi ezingakusiza kakhulu empilweni. ~
Ekuseni okuhle kakhulu, ngilapha futhi endaweni enhle ezweni laseDashi. I-movie emfushane; Ngidlala kakhulu ngomqondo wokutshela okwengeziwe ngezimali zedijithali, ama-cryptos, ama-bitcoin ikakhulukazi ne-ethereum. Ngoba abantu abaningi empeleni bazi okuncane kakhulu ngalokhu futhi njengango-2008 - inkinga enkulu - manje sesibuye futhi ngesikhathi esesabisa abantu abaningi.
Inqubomgomo yokuthenga emuva yamabhange
Ikakhulukazi amabhange aseMelika afana nama-dollar wokuphrinta angasile sengathi akulutho. Futhi siyalubona lolu hlobo lokuhamba naseYurophu; amabhange athenga izikweletu futhi umkhokhi wentela angakwazi ukukhokha futhi. Lokho akuzona izimpawu ezinhle. Lokho futhi kukhombisa ukwehla kwamandla omnotho futhi sibhekana kanjani nalokho? Futhi into enhle futhi ekhethekile ngokuhweba ngokujwayelekile, kepha ikakhulukazi kwizimali ze-crypto, ukuthi nawe ufunda okuningi ngawe. Ubhekana kanjani nokwesaba? Uqala kanjani ukuzakhela isu lokonga imali?
Ngaphezu kwalokho, ngikholelwa ngokuqinile ukuthi iBitcoin izoba yigolide elisha. Ngalokho kufanele impela yamukelwe ngabantu, kepha uma ubheka nje izisekelo zayo;
kungani kuyindlela enhle kangaka?
Uzoqonda ngokuzenzakalela ukuthi kungani kungaba yisixazululo ezinkingeni esibhekene nazo manje. Usuyabona vele eVenezuela. Ukwehla kwamandla emali okungakholeki nabantu abangena ezimali ze-crypto; iDash, iBitcoin, ukuvikela izimpahla zabo / imali yabo futhi kuyasebenza.
Ngakho-ke kukabili ukuthi ngifuna ukwenza la mavidiyo:
tshela okuningi mayelana nokuthi yini iBitcoin ukuyenza yaziwe kakhulu ngabantu
Noma ngabe ufaka i-1% kuphela yemali yakho, ungazuza izinzuzo eminyakeni embalwa. Umuntu onolwazi ubala okubili!
Kuyini Ukwehla Komnotho?
Ukwehla ngokwezimali ngokwezwi nezwi kusho “ukuncipha"Noma"ukuncipha”. Esimweni sokuwohloka komnotho, lokhu kusho ukuthi kunokwehla kokukhula komnotho okulinganiswa kuMkhiqizo Wekhaya Wonke izinyanga eziyisithupha.
Uyini umkhiqizo ophelele wasekhaya?
Leli inani lazo zonke izimpahla nezinsizakalo ezikhiqizwe ezweni esikhathini esithile. Ngakho-ke lapho le GDP ikhombisa ukukhula okungekuhle kwezindawo ezimbili ezilandelanayo, sikhuluma ngokuwohloka komnotho.
OkwangaphambiliniNgaphambiliniUkupha kufanele kugeleze ngezikhathi zobunzima